လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏ ၀ိပဿနာ ဆုံးမစာ | မေတ္တာရိပ်
← မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ၀ိပဿနာသမာဓိ ခေါ် ခဏိကသမာဓိနဲ့ ၀ိပဿနာ မြန်မြန်ရှုပွားသင့်ကြောင်း ဟောကြားချက်
သံဝေဂဉာဏ် သုံးမျိုး →
လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏ ၀ိပဿနာ ဆုံးမစာ
နင်နှင့် မဆိုင်၊ နင့်ပိုင်မဟုတ်
နင့်ရုပ် နင့်နာမ်၊ နင့်သန္တာန်ကို
နင့်ဥာဏ်မစူး ၊ အပျော်မြူး၍
မူးမူးမေ့မေ့ ၊ အများလေံဖြင့်
နေ့ရက်အဖုံ ၊ လွန်ခဲ့ကုန်ပြီ။
နင်နဲ့လည်း မဆိုင် နင်လည်းမပိုင်တဲ့ သူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်ပြီး
သူ့သဘောအတိုင်း ပျက်နေတဲ့ ရုပ်နာမ်ကို အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဥာဏ် မ၀င်စားနိုင်ဘဲ
အပျော်မြူးဖူး မူးမေ့ပြီးနေခဲ့တာ နေ့ရက်များစွာ ကုန်ခဲ့ပြီ။
ဤ၀ိပဿနာ အလုပ်သည် သမထအလုပ်ကဲ့သို့ ပလီဗောဓ ဆိတ်ငြိမ်ရာကြီးကိုရမှသာ ပြီးစီးနိုင်သည်မဟုတ်။
ပါရမီဥာဏ်သည်သာ ပဓာနတည်း။ ပါရမီဥာဏ်ရှိခဲ့ပါမှု တရားနာရင်းနှင့်ပင် ပေါက်ရောက်၍ သွားတတ်၏။ ဃရာဝါသကိစ္စအတွင်းမှာပင် ပေါက်ရောက်နိုင်၏။ အကြောင်းမှုကား ဥာဏ်ရှီသူတို့မှာ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပြင် အိမ်တွင်းအိမ်ပြင် ရွာတွင်းရွာပြင် တွေ့မြင်သမျှသည် အနိစ္စ ဥာဏ်ပွားစီးဖို့ချည်းသာတည်း။
အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ လုံခြုံလျှင် လူသီလ၀န္တဖြစ်ပေပြီ။ သတိလွတ်သဖြင့် ပြုမိလျှင် ရှိပြန်လျှင် ဤအမှုကို နောင်ခါ ငါမပြုဟု တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဓိဌာန်လျှင် လုံမြဲလုံပြန်၏။ သီလ၀ိသုဒ္ဓိ ဖြစ်၏။
စိတ္တ၀ိသုဒ္ဓိ (သမထ) မှာ တတ်နိုင်လျှင် အထူးကောင်း၏။ မတတ်နိုင်လျှင် နေရ၏။ ဥပစာရဘာဝနာ၊ အပ္မနာ ဘာဝနာ ဟူသော စိတ္တ၀ိသုဒ္ဓိကို အသီးမလုပ်သော ယောဂီကို သုက္ခ၀ိပဿက (၀ိပဿနာ သက်သက်ကိုသာ ရှုပွားခြင်း) ယောဂီဟု ခေါ်သည်။ သုဒ္ဓသိပဿက (၀ိပဿနာ သက်သက်ကို ရှုပွားသူ) ယောကီဟုလည်း ခေါ်၏။
ထို့ကြောင့် သီလ၀ိသုဒ္ဓိနေရာကျလျှင် ဓါတုမနသိကာရကို ထူထောင်ရမည်။
ငါပြောချင်တဲ့အချက်တွေ လိုအပ်တဲ့ အကိုးအကားက ဒီမှာတင် လုံလောက်ပါပြီ. ဒါပေမယ့် မင်းတို့ကို ဓါတ် ဉာဏ်ပရမတ် ဉာဏ်လေး အခြေခံရသွားအောင် နောက်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာနီးပါးအချိန်က ရေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့အရေးအသေားတွေဟာ ဘယ်လောက်ခေတ်မီတယ် ရှင်းလင်းတယ်ဆိုတာ သိအောင် ဓါတုမနေသိကာရထူထောင်ပုံကို ဆက်ဖတ်ပြမယ်။
ထူထောင်ပုံက ဤကိုယ်၌ ပထ၀ီဓါတ် (မြေဓါတ်) ၊ အာပေါဓါတ် (ရေဓါတ်)၊ တေဇောဓါတ် (မီးဓါတ်)၊ ၀ါယောဓါတ် (လေဓါတ်) ဟူ၍ ဓါတ်ကြီးလေးပါးရှိ၏။ ဓါတ်ကြီးလေးပါး ရှိ၏ ဆိုသော်လည်း ဤမြေသည်
၁) လောကမြေ – လူအများသိသော သိလာပထ၀ီ ပံသုပထ၀ီ မြေ နှစ်ပါး။ (ပရမတ် မြေ မဟုတ်။ အနိစ္စ အစစ် မ၀င်နိုင်။)
၂) သုတ္တန်မြေ – ဆံပင်၊ မွှေးညင်း၊ ခြေသည်း၊ လက်သည်းစသော ပထ၀ီဓါတ် ၂၀ မြေ။ (ပရမတ် မြေ မဟုတ်။ အနိစ္စ အစစ် မ၀င်နိုင်။)
၃) ပရမတ်မြေ – အထည်ဒြပ်မဟုတ်သော ခက်မာမှုကြိယာ သက်သက်သည်သာ ပရမတ်မြေ အဘိဓမ္မာမြေ အစစ်တည်း။ (အနိစ္စလက္ခဏာရေး အစစ် ၀င်နိုင်သည်။)
အနိစ္စလက္ခဏာရေး အစစ် ဆိုသည်ကား တစ်နာရီအတွင်းမှာပင် အခါများစွာ ပျက်မှု ချုပ်မှု သေဆုံးမှု ကုန်ခန်းမှုတည်း။
အထည်ဒြပ်ပညတ်သဏ္ဍန်ဖြစ်သော ဆံပင်မည်သည် တစ်နာရီအတွင်းမှာ ချုပ်ပျောက်ကုန်ဆုံးမည်ဝေးစွ။ လူသေ၍မှ ဆံပင်မသေသေး။ ဆံပင်၌ ခက်မာမှု ကြိယာတစ်မျိုးသည်ရှိ၏။ ထိုကြိယာသည်သာလျှင် ပရမတ်မြေအစစ်တည်း။ ဆံပင်၌ ထိုမြေဓါတ် အစစ်သည်မှုကား တစ်နာရီအတွင်းမှာပင် အခါများစွာ ပျက်၏ ချုပ်၏ သေ၏ ဆုံး၏ ကုန်၏ ခန်း၏ ကွယ်ပျောက်၏။
ပျက်ပုံထင်ရှားစေခြင်းငှာ ဉာဏ်ဖြင့် ဆံပင်ကို ခွေ၍ကြည့်၊ မြေဓါတ်စစ်မပျက်ခဲ့လျှင် ကိုင်း၍ညွှတ်၍ပင်မရ။ ပကတိအတိုင်း တောင့်တင်းခိုင်မာ၍ ခံနေလတံ့။ ကိုင်း၍ညွှတ်၍ရခဲ့လျှင် ဆံပင်အတွင်း၌ နဂိုမြေဓါတ်တွေမြေ့မြေ့ ကြေပျောက်ပျက်ဆုံး၍ ကုန်ပြီဟု သိအပ်၏။
မြေဓါတ်သစ်တွေ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ၍လပြီဟု သိအပ်၏။ ဉာဏ်စိုက်မိဲ့စွ။ ပရမတ်မြေဓါတ်အစစ်မည်သည်ခက်မာမှု ကြိဟာမျှကိုသာ ဆိုသောကြောင့် ဆံပင်ကိုခွေရာ၌ ထိုဆံပင်အတွင်းမှာ ကြိယာအပြောင်းအလဲကို ဖြစ်အောင် ကြည့်ရသည်။
ကြိယာပြောင်းလဲမှုဆိုသည်ကား မာမှုကြိယာ အခြေအနေ တစ်မျိုးတစ်မျိုးပျက်၍ပျက်၍ မာမှုကြိယာ အသစ်အသစ် အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်၍ သွားမှုကို ကြိယာပြောင်းလဲမှုဆိုသည်။ ကြိယာ ပြောင်းလဲမှု ထင်မြင်ခဲ့လျှင် ကြိယာဟောင်း ပျက်ဆုံးမှု အဆင့်ဆင့် ဧကန်ရှိ၏။
ပျက်စီးမှု မရှိခဲ့လျှင် ပြောင်းလဲမှု မရှိနိုင်။ ကြိယာ ဟောင်း ပျက်ဆုံးမှု အဆင့်ဆင့်တို့နှင့် ကြိယာအသစ်ဖြစ်ပေါ်မှု အဆင့်ဆင့်တို့၏ အကူးအကူး အကြားအကြားတို့၌ အာကာသဓါတ် အခြားအခြားကိုလည်း ဉာဏ်နှင့် မြင်အောင် ကြည်။ အာကာသဓါတ်ကို မြင်တတ်မှ သန္တတိအစဉ်ပြတ်မည်။ ဤ၌ ကြိယာဟောင်း အဆင်ဆင့် ကုန်ဆုံးပျောက်ကွယ်မှုကို အနိစ္စလက္ခဏအစစ်ဆိုသည်။
ဤအနိစ္စကိုမြင်နိုင်မှ ၀ိပဿနာအစစ်ဖြစ်၏။ ဓါတ်၏ပျက်ခြင်း၊ ဓါတ်၏ချုပ်ခြင်း၊ ဓါတ်၏ သေခြင်း၊ ဓါတ်၏ဆုံးခြင်း။ ဓါတ်၏ ကုန်ခန်းခြင်းကို အနိစ္စဆိုသည်။ မရဏအစစ်ပေတည်း။ ဤမရဏအစစ်ကို မြင်မှ ၀ိပဿနာ ဉာဏ်အစစ်ဖြစ်သည်။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ, ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.